Andro: 11 Novambra 2019
Tiorkia High Speed ​​gara; Taorian'ny fanatanterahana ny Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Bursa ary Ankara-İzmir avo làlamby fiaran-dalamby sy ny fampidinana ny kodiaran-dalamby, YHT, izay manan-danja amin'ny fanamboarana lalamby. [More ...]
Tiorkia High Speed ​​sy haingam-pandeha Railway-dalana, sy ny sarintany; Amin'ny fananganana lalamby haingam-pandeha, Istanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir sy ankavanan'i Ankara-Konya dia voatondro ho toy ny tambajotra fototra. 15 no lehibe indrindra amin'ny faritanintsika [More ...]
Fiaran-dàlamby lakolosy sy gebze Halkalı Fanatsarana ny lalan'ny suburban; Ao amin'ny lafiny eropeana Halkalı ary ny distrikan'i Gebze amin'ny lafiny Aziatika dia mifamatotra miaraka amin'ny rafi-pitaterana an-tsambo sy fitaovana avo lenta amin'ny sisin-tany. [More ...]
Torkia Georgia ny fanorenana ny lalamby fanorenana; hanome ny lalamby lalantsara tsy misy tapaka eo amin'i Turkey sy Georgia, Azerbaijan ary ny Repoblika Turkic any Azia Afovoany. [More ...]
Eskişehir dia manome ohatra miaraka amin'ny lalana mivaingana; Eskişehir Metropolitan Munisipaly, izay ohatra ho an'ny andrim-panjakana maro indrindra miaraka amin'ny lalany mivaingana misy ny asa any ambanivohitra, ny 13-14 2019 dia hatao any Ankara eo anelanelan'ny Novambra 1. simenitra [More ...]
EGO Reorganized Line 474 ho Express Line; Ny kaominin'i Ankara Metropolitan, izay nanatanteraka fomba fiasa vaovao amin'ny lalana ho lasa tanàna mampiala-lalana ho an'ny mpianatra, dia nomena ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo tamin'ny alàlan'ny torolalana nataon'ny Ben'ny tanàna Mansur Yavaş. [More ...]
Ny halavan'ny tsipika mihetsika Akçaray Tram Hatramin'ny 20 Kilometer; Ny kaominina ao Kocaeli Metropolitan dia nanitatra ny tsipika Akçaray Tram teo anelanelan'ny gara fitobian'ny Bus sy ny Kampus Training Sekapark ka hatrany amin'ny lalan'ny Beach. Fanatanterahana ny tsipika vaovao, 11 Novambra [More ...]
Liberalisation ny Sehatra amin'ny lalamby sy fanarenana TCDD; Rehefa nozahana ny lalamby an'ny firenena mandroso dia hita fa ny sehatra dia natsangana araka ny fanovana ny toe-javatra sy ny filàna. Ny fitohizan'ny fampandrosoana ny lalamby Tiorka amin'ny alàlan'ny fahazoana fotoana, manomboka ny fitaterana mankany amin'ny indostrian'ny lalamby, [More ...]
10 November Surprise ao amin'ny IETT Station; Profesora Ali Kemal Yiğitoğlu Kilonga sy sekoly ambaratonga faharoa dia nanantona ny sarin'i Atatürk tao amin'ny biraon'ny IETT tamin'ny tsingerintaona faha 10 Novambra. Profesora Ali Kemal Yiğitoğlu mpianatry ny Kilonga sy sekoly ambaratonga faharoa [More ...]
Fambara avy amin'ny Filoha Yavaş ka hatramin'ny Yıldırım Beyazıt Mpianatra amin'ny Anjerimanontolo; Mansur Yavaş, Ben'ny tanànan'ny Ankara Metropolitan, dia nanampy vaovao hafa ho an'ny mpianatra eto an-drenivohitra. Raha jerena ny tetibola ataon'ireo mpianatra mandalo eto an-drenivohitra [More ...]
Mifandray amin'ny Hulusi Akar Boulevard i Derevenk
Derevenk dia mifandray amin'ny Hulusi Akar Boulevard; Taorian'ny Derevenk Viaduct izay natokana ho an'ny fidirana ny Filohantsika Recep Tayyip Erdoğan sy ny làlana mifandray, dia nanomboka nampifandray ilay valan-jotra mivantana tany amin'ny Hulusi Akar Boulevard ny asa. Metropolitan [More ...]
Uludağ tariby fiara fijery! ; Tiorkia Uludag amin'ny alalan'ny tariby fiara izay ho fampitandremana tonga iray amin'ireo manan-danja indrindra ririnina fizahan-tany foibe sy ny natiora. Fiara tariby izay manome fitaterana hafa eo anelanelan'ny afovoan-tanànan'i Bursa sy Uludağ [More ...]
Misy lamasinina hafainganam-pandeha anelanelan'ny tetikasa 10 haorina ao Bursa; Söze… “Manantitrantitra ireo fivoarana amin'ny lamasinina haingam-pandeha ianao, ary manaraka akaiky izahay. Avelao aho hanome anao ny vaovao farany indrindra Amin'ny asabotsy… [More ...]
Plajyolu Tram Line napetraka amin'ny serivisy
Plajyolu Tram Line napetraka ao anaty serivisy; Tamin'ny herinandro lasa teo, ny fiara fitaterana an'i Kocaeli Ben'ny tanàna Assoc. Dr. Campus fanabeazana Tahir Büyükakın Ny traman'ny làlan-dranomasina dia napetraka nanomboka androany. [More ...]
Fanokafana làlan'ny bisikileta Bike eny an-dàlana Istanbul; Nifarana ny asa tamin'ny làlan'ny bisikileta, izay efa am-piasana ela. Lalan'ny bisikileta aorin'ny sary hosodoko sy ny fanesorana ireo sakana vy amin'ny sisin'ny arabe [More ...]
Eskişehir Perhatian ..! Fandaharam-potoanan'ny Opera Tram City hijanona; 12 Novambra 2019 amin'ny làlan-dàlan'ny làlamben'i Eskişehir lehibe - Hopitaly Şehir - hajanona ny talata Opera amin'ny talata. [More ...]
Tonga ao amin'ny hôpitalin'ny tanàna ny lisitra vaovao Akçaray
Ho tonga ao amin'ny Hopitaly City ny lisitra vaovao Akçaray; Ny tetikasa vita amin'ny fanitarana ny làlan'ny tram mankany amin'ny Hopitaly City ao amin'ny parlemanta izay ho tanterahina eo ambany fitarihan'ny Ben'ny tanànan'i Metropolitan Tahir Büyükakın dia ho tanterahana amin'ny drafi-pandrindran'ny Kocaeli Metropolitan Munisipaly. [More ...]
971 Emirà Arabo Mitambatra
Dubai Tram 5 28 Mitondra mpandeha an-tapitrisany isan-taona
11 Novambra Ny 2019 ao amin'ny Dubai Tram amin'ny 5. mankalaza ny tsingerintaona niainany dia nitatitra ny Highways and Transportation Authority (RTA) fa ny tram dia singa manan-danja amin'ny rafi-pitaterana fiaran-dalamby any Dubai sy ny tamba-jotra fitateram-bahoaka. Tram tonga any Dubai [More ...]
Tonga ny Express Intercity High Speed; Ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia manomana ny vaomieran'ny haingam-pandeha ambony hainganana (YHT) vaovao amin'ny 2020, ary hametraka serivisy serasera amin'ny làlana YHT hanatsarana ny fahombiazana. Hürriyet [More ...]
Last Minute fivoarana ao Istanbul Channel Project: Channel Istanbul Torkia ny Mega tetikasa mbola hatao farany minitra fivoarana ao amin'ny tetikasa. Mbola miandry ilay daty voalohany hambara amin'ny tetikasa i Kanal victimsstanbul. [More ...]